HomeSuuqa kala iibsigaDaafaca 26 jirka ah ee Chelsea oo lala xiriirinayaa inuu si lama filaan ah ugu dhaqaaqayo Serie A
November 29, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
LONDON, ENGLAND - AUGUST 18: Emerson Palmieri of Chelsea FC in action during the Premier League match between Chelsea FC and Leicester City at Stamford Bridge on August 18, 2019 in London, United Kingdom. (Photo by Chloe Knott - Danehouse/Getty Images)
Juventus ayaa diyaar u ah inay soo nooleyso xiisihii ay u qabtay daafaca Chelsea ee la ilaaway Emerson Palmieri. Emerson oo yimaaday Chelsea xilligii Antonio Conte tabaraha ahaay, waxa uu ahaay bedel waxtar leh oo u fadhiya Marcos Alonso oo kaasoo ahaay daafaca bidix ee Chelsea. Weli muu ciyaarin PL ilaa iyo haatan ololahan, iyadoo afartiisa kulan ay wadaageen UCL iyo Carabao Cup.
Si kastaba ha noqotee, markii laga soo iibsaday Ben Chilwell oo ka yimid Leicester City xagaaygan, ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Talyaaniga ayaa xitaa hoos uga dhacay safka tababaraha Ingariiska. Emerson layaab ma noqon doonto haddii uu doorto inuu ka tago jiilaalka soo socda ee suuqa kala iibsiga.
Bianconeri ayaa diyaar u ah inay Palmieri u soo bandhigto dib ugu soo laabashada Talyaaniga, iyadoo ragga Andrea Pirlo loo maleynayo inay muddo ku raad joogeen. Warbixinta ayaa soo jeedinaysa in labada dhinacba ay u hamuun qabaan in heshiiska la dhammeeyo, sidaa darteed waxay umuuqataa inay ku imaanayso sidii caadiga ahayd iyo dhaqaale xumida ku jirta.
26 jirkaan ayaa inta badan loo isticmaalay ku xigeen Marcos Alonso sanad iyo badhkii lasoo dhaafay ee Chelsea. Laakiin imaatinka Ben Chilwell oo ka yimid Leicester City xagaaygan ayaa arkay inuu hoos ugu sii dhacayo dalabkiisa. Haatan waxay umuuqdaan inay diyaarinayaan isku day kale oo ay ku doonayaan daafaca reer talyaani jiilaalka.
Andrea Pirlo ayaa qabtay shaqada Old Lady horaantii xagaaga, waxaana uu isku dayay inuu dib u dhiso kooxda da’da ah ee kooxda reer Turin. Waxaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo daafaca reer Talyaani, iyadoo wararka qaar ay xitaa soo jeedinayaan in Blues ay diiday dalab uga yimid daafaca bidix.